Varume Vatatu Vakachenjera panharembozha yako nezvishandiso izvi | Nhau dzepaphone
Ignatius Room | | IPhone mitambo
Tave kuda kupedzisa zororo reKisimusi, mabiko achapera zviri pamutemo musi wa 6 Ndira, apo vachenjeri vatatu vanoshanyira mamiriyoni edzimba kunosiya zvipo zvavo. Vamwe vanhu vakavamba zvirambidzo zvakakwirira zvakadaro kuti ndikwanise kuenda kumaparadhi ayo, mhuri dzinopfuura imwe, dzakarasikirwa nechido chekuenda.
Kana iwe uchigara muguta, uko kutasva bhiza kwakadzimwa nekuda kwekubuda kwe coronavirus, usati wanyadzisa mwanakomana wako uye kuti haugone kuvaona, unogona kushandisa chero akasiyana maapplication anowanikwa muApp Store kuitira kuti vadiki vataure nekuita. kufona kwevhidhiyo nevaMagi, ndisina kumbobva pamba.
Chinhu chekutanga chatinofanira kufunga nezvacho pakusarudza imwe kana imwe application ndeye zvisingabvi pamaonero avanawo muApp Store. Vazhinji vavo vakaipa zvikuru. Izvi zvinodaro nekuti vabereki vakaodzwa mwoyo nekuwana application iyo isingape hushoma hwemhando.
Zvisinei, vadiki, vane muganho wakapamhama wemafungiro Uye kana vakatarisa zvishoma seVatatu Vakachenjera, kushandisa kwacho kwakakosha, kunyanya kana vasati vatanga kusvika kune tekinoroji sevana kubva pamakore manomwe kusvika masere.
Zvakadaro, sarudzo yekupedzisira kurodha uye kuisa chero yeaya maapplication inogara iri yako. Kubva kuActualidad iPhone tinokuratidza sarudzo dzakanakisa dziripo muApp Store, iyo nenzira isiri yakawanda, kuitira kuti vadiki vagone kuita. kufona kwevhidhiyo nevaMagi.
Aya mavideo call hapana chimwe kunze kwemavhidhiyo akarekodhwa iripo mukushandisa sezvo pasina nguva yavanotipa mukana wekugadzirisa meseji ine zita revana vedu sekunge isu tinogona kuita nezvimwe zvikumbiro zveSanta Claus, zororo rakakurumbira pasirese kupfuura Madzimambo Matatu.
1 Vhidhiyo kudana Vachenjeri Vatatu
2 Vhidhiyo kufona nevaMagi
3 Vhidhiyo kudana Vachenjeri Vatatu
4 Mufananidzo wako nevaMagi
5 Tsamba kuna vaMagi
Vhidhiyo kudana Vachenjeri Vatatu
Kutenda kune matatu Kings Vhidhiyo Call application, iwe unozoshamisa vana vako nevhidhiyo kufona kubva kune wavanofarira Akachenjera Mambo. Vatambi vakarekodha mavhidhiyo aya inyanzvi uye vose vanotevera script imwe chete iyo vanobvunza mudiki (zviri pachena pasina kumirira mhinduro yake) kuti vakaita sei gore rose, zvinyorwa zvipi zvavakatora, kana vachibatsira nguva dzose kumba. ...
Kana tichida kuchengetedza maitiro evana vedu, tinogona kushandisa basa rinowanikwa muIOS rinotibvumira rekodha skrini ye iPhone yedu kana iPad panguva iyo kufungidzirwa kufona kwevhidhiyo, kurekodha kwatinogona kuzogovana neshamwari nemhuri.
Iwo matatu Kings Vhidhiyo Call application iripo kune yako download zvachose mahara, inosanganisira ads, asi hapana mu-app kutenga. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod touch uye inoda OS 11.2 sediki.
Zvinoenderanawo ne Macs anofambiswa neApple's M1 processor uye izvo zvinotungamirwa ne macOS 11.0 kana gare gare, izvo zvinozotitendera kuti tinakirwe nemavhidhiyo aya mafoni pane yakakura skrini saizi kana isu tisina iPad.
Vhidhiyo kufona nevaMagi
NeVideollamadas con Reyes Magos application, vana vedu vane mukana we taura navaMagi kubva ku iPhone yedu kana iPad kupindura mibvunzo yakajairwa yemaitiro avakaita, kuti zvinyorwa zvave sei, kubatsira kwakawanda sei kumba ...
Iyo Vhidhiyo Inofona neVatatu Vakachenjera application iripo kune yako download mahara. Inoenderana ne iPhone ne iPad uye inosanganisira kutenga mu-app kugonesa kurekodha kufona, kunyangwe iOS ichipa iyi sarudzo natively, saka haufanirwe kuishandisa kunze kwekunge iwe usingade iyo app zvakanyanya uye isu tinoda tsigira mugadziri.
Iwo matatu Kings Vhidhiyo Call application, Varume Vatatu Vakachenjera vachafona pavhidhiyo nevana vako kuvabvunza zvavanoda kugamuchira, kana vachinyatsokodzera zvipo, maitiro avakaita, kana vakabatsira ...
Iyo vhezheni yeIOS (inowanikwawo kune Android), zvinongobvumira kuti tiite vhidhiyo kufona. Kana isu tiine vana vakawanda, isu tichafanirwa kushandisa imwe yemaapplication yatinokuratidza mune ino chinyorwa kana kushandisa mu-app kutenga inovhura iyo muganhu.
Ichi chishandiso chinowanikwa kune yako kurodha mahara uye sanganisira ma ads. Haina kuvandudzwa kwechinguva, saka zvichienderana neiyo iOS vhezheni ye iPhone yako, inogona kusashanda nemazvo.
Mufananidzo wako nevaMagi
Mufananidzo wako nevaMagi haisi application yekufona pavhidhiyo. Nekudaro, zvakanakira kugadzirisa mafoto ako enguva ino yegore neMadzimambo matatu muchimiro chezvimiti. Ichi chishandiso chinowanikwa muApp Store uye Play Store.
Nekuda kwechishandiso ichi, unogona kutora mufananidzo wekamuri umo, setsika, Varume Vatatu Vakachenjera vanosiya zvipo zvavo kumba kwako, vawedzere neiyi app uye ratidza mwana wako paanomuka asati awana zvipo zvose zvavakamusiyira.
Iko kushandisa Mufananidzo wako neMagi, inowanikwa kune yako download mahara uye zvinosanganisira kutenga kubvisa zviziviso zvinosanganisirwa neapp. Kuti uise iyi application, yedu iPhone, iPad kana iPod touch inofanirwa kutungamirwa ne iOS 9 kana kupfuura.
Kana isu tiine Mac, isu tinogona kuisa iyo application chero inotarisirwa nayo Apple M1 processor uye macOS vhezheni 11.0 kana gare gare.
Tsamba kuna vaMagi
Netsamba yekunyorera kuMagi, vana vedu vanogona nyorai tsamba kuvachenjeri Kana usati watoita kudaro kusati kwava kunyanyononoka, kunyange zvazvo vabereki vasingatongokanganwi kutenga zvipo zvose zvaunoda, kure sezvinobvira.
Kana tangogadzira tsamba kuVarume Vatatu Vakachenjera, tinogona kuigoverana nevose avo mhuri neshamwari kana kutora kwavo chikamu mukutenga zvipo zvevaduku kwakarongwa. Tsamba kuna Magi iripo yako download zvachose mahara uye zvinosanganisira kutenga mu-app kubvisa zvese ads.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Varume Vatatu Vakachenjera panharembozha yako neaya maapplication
Chii chinonzi kalendari hutachiona uye sei kuibvisa kubva ku iPhone yako
Apple yakatengesa mamirioni makumi mana e iPhone 40s Kisimusi ino